सबैकी आँखाकी नानी अनिता बिस्तारै निको हुँदै, आज आफैले दाँत माझिन ! – AB Sansar
December 14, 2020 Ab-संसारLeaveaComment on सबैकी आँखाकी नानी अनिता बिस्तारै निको हुँदै, आज आफैले दाँत माझिन !
काठमाण्डौ । अनितालाई नचिन्ने सायदै बिरलै होलान् । यी उनै अनिता हुन् जस्ले श्रीमानको रुपमा साक्षात ईश्वरलाई पाएकी छन् । श्रीमान विनोदको माया र सहयोगले अनिता दिनप्रतिदिन निको हुँदै गईरहेकी छन् । आजभन्दा एक डेढ वर्ष पहिले श्रीमान बाहेक सबैले आश मारिसकेको अनिता र हिजोआजको अनितामा धेरे सुधार भईसकेको छ । अनितालाई उनकी अमाज्यू दिदीले पनि उत्तिकै केयर र माया गरेकी छन् जति श्रीमान विनोदले गरिहेका छन् । *****भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला*****
खुल्यो जागिर : नेपाल विद्युत प्राधिकरणले माग्यो यति धेरै कर्मचारी
भिरबाट चिप्लिएर लडदा ६६ वर्षीय वृद्धको मृ,त्यु
August 14, 2021 August 14, 2021 Ab-संसार
सरकारी कार्यालयका हरेक गतिविधि बाहिर देख्ने सक्ने गरी सीसीक्यामेरा राखियोस् : खिमलाल देवकोटा !!